Trump oo lagu dhaliilay 'dareen la'aan' mar uu la hadlayey carmalad - BBC News Somali
Trump oo lagu dhaliilay 'dareen la'aan' mar uu la hadlayey carmalad
Image caption Trump waxaa lagu eedeeyey in hadalladiisa aysan 'naxariis' lahayn
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay carmalad uu ka dhintay askari si dhuumaalaysi ah loogu dilay Niger in "uu ogaa hawsha loo shaqaaleysiiyey" sida ay sheegtay gabar sharci dejinta ka tirsan.
Federica Wilson oo ka tirsan Kongaresska waxay sheegtay in ay maqashay hadallo "aan wax dareen ah lahayn" oo gabadha telefoonka loogu sheegay, mar ay gaari la saarnayd qoyska laba alifle David Johnson.
Waxay sheegtay in madaxweyne Trump uu intaas ku daray "waxaan filayaa inay ku xanuujisay".
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalka uu Mr Trump la yeesho qoysaska askarta dhimata ay yihiin kuwo gaar ah.
Laba alifle Johnson oo 25 jir ahaa wuxuu ka mid ahaa 4 askari oo Maraykan ah horraantii Oktoobar lagu dilay deegaan ay koox mintidiin ah, oo ay ku jiraan kuwo Al Qaacida taageera, ka hawlgalaan. Carmaladdii uu ka dhintay, Myeshia, ayaa sidda uurka ilmihii 3aad.
Waraysi ay siisay CNN ayey Ms Wilson ku sheegtay in telefoonka Mr Trump uu yimid in yar ka hor markii naxashkii uu ku jiray meydka laba alifle Johnson uu imaanayey Miami.
Haweeneydan oo ka tirsan xisbiga Dimoqaraadiga ayaa sheegtay in qayb ka mid ah wada hadalka ay ka maqlaysay samaacadda telefoonka.
Waraysi kale ayey ku tiri Ms Wilson "haa sidaas wuu yiri. Waxay aniga iila muuqataa in la dhihi karo, laakin aan lagu oran karin carmalad barooranaysa".
"Qof kastana wuu garanayaa marka aad dagaal aado, inay dhici karto in aadan soo laaban adigoo nool. Laakin ma aha in taasi aad xusuusiso carmalad barooranaysa. Waa arrin damiir la'aan ah" ayey raacisay.
Hadalladaas la sheegay waxay caro ka dhex dhaliyeen baraha bulshada, ayadoo Ms Wilson ay Twitter ku sheegtay in Mr Trump "uusan lahayn shakhsiyaddii, garashadii iyo naxariistii u ku ahaan lahaa madaxweynaha Maraykanka".
Mr Trump waxaa lagu dhaliilay inuusan dhakhsiyo ula xiriirin qoysaska afarta askari ee la dilay. Isniintii ayuu sheegay inuu warqado u qoray qaraabadooda, uuna qorshaynayo inuu si dhakhsiyo leh ula hadlo.
Image caption Trump wuxuu Obama ku eedeeyey inuusan ka tacsiyeyn geerida wiilkii uu dhalay taliyihii ciidamada Maraykanka.
Goor dambe ayuu aqalka cad sheegay in madaxweynuhu uu la hadlay qoysaskaas, laakin lama sheegin goorta ay ahayd.
Talaadadii ayuu Mr Trump sheegay in madaxweyne Barack Obama uusan la hadlin qoyska taliyihii ciidamada, Jeneraal John Kelly, markii wiilkooda lagu dilay Afghanistan 2010.
Hadalkan ayuu ku sheegay waraysi uu ku difaacayey mowqifkiisa ah in ninkii isaga ka horreeyey uu dayacay inuu la hadlo qaraabada askartii dhimatay. Hadalka ayaa ka caraysiiyey gacan yarayaashii hore ee Mr Obama.